Dadka Giriiga oo u soo qaxaya Iswiidhan. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka Giriiga oo u soo qaxaya Iswiidhan.
La daabacay tisdag 8 november 2011 kl 11.30
Qashinka oo buuxa mid ka mid ah waddooyinka Athens ka dib xaalada dhaqaalaha oo xumaatay
Dadka leh tacliinta ee dalkaasi Giriiga ayaa hadda bilbaabay in isaga qaxaan dalkooda ka dib markii xaalada dhaqaalaha dalkaasi ay sii adkaatay iyada oo qaar badan oo ka mid dadka ka soo qaxay dalkaasi ay soo gaareen Iswiidhan sida uu sheegay Dimitrios Karkamanis oo agaasime iyo la taliye ka ah urur xiriiriya Iswiidhan iyo mujtamaca Giriiga.
Dadka intooda badan soo gaaray Iswiidhan ee ka soo tegay Giriiga ayaa ah dhaqaatiir, Injineero iyo dad dhammeystay waxbarashada jaamacadda waxaa xitaa ka mid ah shaqaale caadi ah oo doonaya in ay ka shaqeystaan Iswiidhan ama ay wax ka bartaan.
Marka si loo fiiriyo Iswiidhan waa ay u wanaagsantahay dadkani shaqo ahaanta ugu soo qaxaya Iswiidhan waayo baa la leeyahay waa dad aqoontooda wanaagsantahay oo Iswiidhan hal Karoon kagama baxayo waxbarashada dadkani waana dad buuxinaya boosaska shaqo ee hadda ka banaan Iswiidhan sida uu sheegay Dimitrios Karkmanis.